Sida loo sameeyo barnaamij kasta oo la jaan qaada Google's Chromecast | Androidsis
Kajawaabida su aalaha aad si ficil ah maalin kasta iiwaydiiso adoo adeegsanaya boostada, fariimaha Telegram ama faallooyinka blogka iyo faallooyinka Youtube, maanta waxaan rabaa inaan kuu sharaxo sida ugu fudud ee aan ku samee barnaamij kasta oo la jaan qaada Google's Chromecast si aad uga aragto shaashadda telefishankayaga ku xidhan.
Qaabku waa mid fudud oo iga qosliya in aan ugu yeero maqaalkan barashada fiidiyowga ee wax ku oolka ah, in kasta oo maadaama qof kastaa aanu garanayn ikhtiyaarkan, waxaan go aansaday in aan qoro maqaalkan oo aan ku duubo fiidiyowgan halka aan ku tusay sida loo isticmaalo ikhtiyaarka muraayadda shaashadda si loo sameeyo barnaamij kasta oo la jaan qaada Google's Chromecast.
Ka soo deg Google Home si bilaash ah Google Play Store
para hel muraayadda shaashadda wax kasta oo ku dhaca Android-keena oo aan si toos ah ugu aragno shaashadda telefishankayaga ku xidhan, waxaan u baahan doonnaa oo keliya inaan ka soo dejino codsiga Google Home Dukaanka Google Play Store.
Codsiga Google Home waa barnaamijka rasmiga ah ee Google si loo xakameeyo aaladaha ku xiran Google sida Google Home, Chromecast Audio, iyo Chromecast.
Marka codsiga la soo dejiyo, wuxuu iskaan doonaa si uu u raadiyo aaladaha ku xiran Google. Marka iskaankan la dhammeeyo, waxaan ku gali karnaa koontadeena Google, waxaan ku dhajin karnaa dhinaca dhinaceeda si aan u galno xulashada dalabka oo aan u xusho ikhtiyaarka shaashad u dir ama shaashad shaashad.
Iyada oo tan ay noqon doonto in ka badan intii ku filneyd in la awoodo ka eeg wax codsi ah shaashadda weyn ee TV-gayaga ku xiran Chromecast.
Fiidiyowga aan kaaga tagay midig bilowga boostada waxaan si faahfaahsan kuugu tusayaa sida loo soo dejiyo oo loo rakibo arjiga, sida loo galo cinwaankeena Google iyo sida loo sameeyo shaashadan dir ama shaashad shaashad ka soo qaadaysa bartayada 'Android terminal' iyo TV-ga ku xidhan Google's Chromecast.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Sida loo sameeyo barnaamij kasta oo la jaan qaada Google's Chromecast
Had iyo jeer uma muuqato wax wanaagsan ama dib-u-dhac ayaa ku jira marka la dirayo
Jawaab Sebastian Monaco
Kaalay maxaa dijo
Taasi ma ahan mid ka dhigaysa mid is waafajinaysa, taasi waxay samaynaysaa muraayad aan isku mid ahayn ... Maqaalkani dad badan buu wareeri karaa.
Jawaab Anda que
Waxaa muhiim ah in la ogaado in markaad muraajiceyneyso, aadan xiri karin moobiilka, tan iyo markaas waad joojin doontaa dirista waxyaabaha. Taasi waxay ka dhigeysaa daawashada filimka dheecaanka batterigaaga keenaya kuleyl badan. Aniga aragtidayda magdhaw uma ahan daawashada dheer.
Maaha wax la mid ah barnaamij isku mid ah oo ku habboon barnaamijka chromecast. Ma demin kartid shaashadda taleefanka gacanta, wuxuu kaa shubayaa batterigaaga oo badanaa wuu kululaadaa waqti yar kadib. Intaas waxaa sii dheer, sawirka ama dhawaqa ayaa had iyo jeer la qaboojiyaa ama la xanibay.
Muxuu yahay maqaal qosol badan ...
haye subax wanaagsan
Waxaan qarka u saran ahay inaan iibsado kram chrome, xiisahaygu waa inaan awood u yeesho inaan ku muraajaco arjiga whatsappka ama si la mid ah miyaad ka ogaan doontaa kabka kasta ee loo isticmaali karo barnaamijka whatsapp?
-i ii sheeg khibradaada haddii qof cidi isku dayday
Ku jawaab saulinsky
Hadda waad soo dejisan kartaa sawirrada sawirada OnePlus 5